Izindaba - Inqubo Yokukhiqiza
Izinto 1.Choose: borosilicate High ingilazi tube
Ukukhetha usayizi ohlukile, ukushuba nobubanzi ngokuya ngemikhiqizo edinga ukukhiqizwa. Futhi kunemibala ebonakalayo, esobala, eluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, ompunga, opinki, omnyama, Umbala osetshenziswa kakhulu ubala.
2.based ngosayizi womkhiqizo ukwenza ingilazi yokudweba
Fudumeza ishubhu lengilazi bese ususa ithubhu ngakolunye uhlangothi, Bese uxhuma ukuphela okusele ngepayipi lenjoloba, Omunye umkhawulo wepayipi usemlonyeni wakho, Ngalesi sikhathi, ingilazi iyancibilika, bese ifakwa kwisikhunta, iqhume umoya ungene engilazini, mayivuthe, bese ujikelezisa ingxenye yengilazi ngasikhathi sinye, mayizungeze isikhunta
Ngemuva kwezinqubo eziningi zokushisa, ukushisa komlilo kwengilazi uqobo kwehlukile ezindaweni ezahlukahlukene, okuzoholela ekucindezelekeni okungahambelani komkhiqizo uqobo. Ekugcineni, umkhiqizo udinga ukufudunyezwa ngokulinganayo kanye.
Faka imikhiqizo esithandweni somlilo, Kukhona ibhande elihambayo elingena ngakolunye uhlangothi liphume ngakolunye. Ngalesi sikhathi beka umkhiqizo kusuka komunye umkhawulo ungene, kancane kusuka ezingeni lokushisa eliphansi kuya ekushiseni okuphezulu. Izinga lokushisa eliphakeme lisondele endaweni encibilika yengilazi, bese lisuka ekushiseni okuphezulu liye ekushiseni okuphansi. Yonke le nqubo ithatha cishe ihora elilodwa. Umkhiqizo ophuma kanjena uphephe kakhulu.